Shina Pet Ny fanafody famelomana fanafody famelomana fanafody ho an'ny alika sy saka dia azo omena takelaka misy kalsioma ho an'ny famonoana biby mpamokatra orinasa mpamokatra | MiaSein
Fanafody fitsaboana biby mampahery manome sakafo fanafody ho an'ny alika sy saka dia azo omena takelaka misy kalsioma ho famonoana biby fiompy
Anaran'ny vokatra: Fanafody fitsaboana biby mampahery manome sakafo fanafody ho an'ny alika sy saka dia azo omena takelaka misy kalsioma ho famonoana biby fiompy
Description: Aorian'ny famenoana rano na fanafody dia aza hadino ny mikendry kely kokoa ny tendanao ary mandroso. Raha tsy izany dia mety haroran'ny alika ilay fanafody. Amin'ny alàlan'ny mpamahana fanafody biby dia tsy mila miasa mafy intsony ny alika vao mahazo fanafody.
Torolalana: [Fanafody sy fanafody fanafody]: Fenoy fanafody na fanafody ranoka ilay mpamatsy fanafody, sokafy ny vavan'ny biby fiompy ary amboary, tendreo ny tendany, ary atositosika mafy ny piston. rano, afehezo ny takelaka na kapsily, sokafy ny vavan'ny biby fiompy ary amboary izany, kendreo ny tendanao, ary atositosiho mahery ny piston
Fomba: feeder fanafody
Size (amin'ny cm): halavany 15cm * 6cm sakany
Endri-javatra: Manome rano, manome sakafo
Fomba fanasan-damba: Sasao amin'ny rano madio, maina amin'ny lamba maina na maina amin'ny toerana mangatsiaka sy misy rivotra
Fomba fitehirizana: mitahiry amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, sorohy ny masoandro, ary alao antoka fa tsy misy hamandoana eo ambonin'ny vokatra alohan'ny fitehirizana, mba tsy hiteraka bakteria
Mariho azafady: Ity vokatra ity dia noforonina sy novokarin'ny orinasa irery. Tsy manohana ny fanaingoana azy ity vokatra ity. Diovy dieny izao ny takelaka aorian'ny sakafo hariva. Diovy ary tahirizo misaraka amin'ny latabatra an'ny olona. Rehefa manome sakafo sy rano ny sakafo, azafady aza fenoy ny rano sy ny sakafo feno loatra, mba hisorohana ny fivadihan'ny biby fiompy rehefa mihazakazaka, ary ny fahasimban'ny sakafo ateraky ny biby dia tsy afaka mamarana ny fihinanana. Hadisoana fandrefesana amin'ny tanana, azafady mba jereo ny tena zavatra. Azafady mba soloina ny rano sy ny sakafo ao amin'ny mpamatsy sakafo sy ny mpanondraka rano ara-potoana mba hisorohana ny fahasimban'ny rano sy ny sakafo, misy fiatraikany amin'ny fiarovana ny vokatra sy ny fahasalaman'ny biby. Raha tsy afa-po amin'ny vokatra ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Previous: Kitapo saka azo entina kitapom-batsy alika saka saka lehibe habakabaka Capsule mandeha kitapo saka mitondra kitapo
Manaraka: Akanjo puppy lamaody marika Corgi Pug bulldog alika kely ririnina Pet Puppy Fall Winter Clothes